Qubanaha » Shirka London oo la soo gabagabeeyay iyo war murtiyeed laga soo saaray
Qubanaha.net-Muqdisho-Shirkii ugu socday magaalada London oo looga hadlayay arrimaha amniga iyo dhaqaalaha iyadoo qodobo muhiim u ah Somalia ay ka soo baxeen shirkaasi oo martigelineysay dowladda Ingiriiska.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa carabka ku adkeeyay ahmiyadda ay leedahay alkumidda barnaamij ay Soomaalida hormuud u tahay oo lagu tababarayo ciidammada qaranka Soomaaliya.Ra’iisal wasaaraha Britain, Theresa May ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay iskaashi dhaw oo ku aadan qaabka loo wajahayo dhismaha ciidan qaran oo ay Soomalaiya leedahay.
”Heshiiska dhinaca amaanka ee aan halkan ku soo bandhigayno waxa lagu salayn doonaa heshiiskii taarikhiga ahaa ee ay dhowaan gaareen dowlada Federaalka iyo maamulada ka jira dalka oo ka heshiisyey tirada ciidanka, halka ay ka hawlgeli doonaan, maalgelintooda iyo cidda hagaysa” ayay tiri, ra’iisal wasaaraha Britain.
Waxaa sidoo kale kulankan ka qeybgalay madaxda dalalka ku tabarucay howlgalka AMISOM. Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, ayaa ku baaqay in 4000 oo askeri oo dheeraad ah lagu daro ciidammada AMSIOM oo gaaraya hadda 22,000. Waxa uu sheegay in AMISOM aysna ka bixi karin Soomaaliya ilaa iyo inta si buuxda loo dhisamyo ciidammada qaran oo ay Soomaalid leedahay.
Madaxweynaha Soomaaliya oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in inkasta oo Soomaaliya horey loogu qabtay shirar badan, haddana shirkan uu kaga duwan yahay kuwii hore in waqtigan Soomaaliya ay joogto “xaalad aysan marnaba dib u laaban doonin”.